Xiaomi Mi MIX 5G iyo Mi 9 Pro 5G waxaa la soo bandhigey Sebtember 24 | Androidsis
Xiaomi Mi MIX 5G iyo Mi 9 Pro 5G horeyba waxay u lahaayeen taariikh soo bandhigid
Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaa laga faallooday in Xiaomi uu nooga tagi doono bishan laba taleefan oo leh 5G, sidaan horeyba kuugu sheegnay. Hadda waxaa la xaqiijiyay in labadan taleefan ay yeelan doonaan 5G, sida sumadda Shiinaha ay leedahay ku dhawaaqay soo bandhigida rasmiga ah ee Mi MIX 5G iyo Mi 9 Pro 5G. Soo bandhigid toddobaadyo la isla dhexmarayay.
Waa dhacdo dhacda dhamaadka bishan, wax sidoo kale beryahanba la hadal hayey. Marka usbuuc gudihiis waxaan ku ogaan karnaa wax walba oo ku saabsan Xiaomi Mi MIX 5G iyo Mi 9 Pro 5G si rasmi ah. Dhacdo shaki la'aan abuuri doonta cinwaano.
Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa taas Sebtember 24 Mi MIX 5G iyo Mi 9 Pro 5G ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa. Toddobaad sugitaan ah si loo ogaado labada taleefan ee cusub ee ugu sarreeya ee Shiinaha, oo sidoo kale la socda 5G labada xaaladood, shaki la'aan waa arrin muhiim u ah heerkan cusub ee sare.
Labadan nooc ayaa ilaa hadda waxoogaa daadanaya. Waxa aan ognahay waa in Mi 9 Pro 5G uu la imaan doono kan lacag la'aan wireless cusub laga soo qaatay nooca Shiinaha, loo yaqaan My Charge Turbo, taas oo aan horay uga hadalnay soo bandhigideeda bishan. Mid ka mid ah howlaha xiddiga ee taleefanka.
Inta soo hartay, maalmahan soo socda waxaa jiri doona kuwo badan wuxuu ka digayaa labadan cusub ee dhamaadka sare leh laga bilaabo Xiaomi. Yar yar ayay naga caawiyaan si aan fikrad uga helno waxa ay shirkaddu nooga tegeyso labadan taleefan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa la qiyaasayaa in tMIUI 11 ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa munaasabada.
Laba nooc oo cusub, taas oo ballaarineysa buugga weyn ee Xiaomi. Sidan oo kale, nooca Shiinaha ayaa sii wadaya mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon, soo bandhigaya soona bandhigaya taleefannada ugu badan suuqa. Toddobaad gudihiis ayaan ku ogaan doonnaa wax walba oo waxaannu kuu sheegi doonnaa wax walba oo ku saabsan labadan darajo sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Mi MIX 5G iyo Mi 9 Pro 5G horeyba waxay u lahaayeen taariikh soo bandhigid
OnePlus 7T wuxuu horey u lahaa taariikh soo bandhig rasmi ah